Accounting Careers Archives - Burburin Exam CPA The (Pass on Your First Try!)
10 Jan CFA vs CPA: Waa kuwee waa ku Khayrroon yahay in aad loogu talagalay?
Posted at 22:00h in Accounting Careers, Main Blogroll 0 Comments
Professionals ee maaliyadda inta badan ku eryan shahaadooyinka xirfadeed si loo horumariyo xirfadaha ay. Shahaado Xisaabiyaha Guud (CPA) iyo Falanqyeeyaha Chartered Financial (CFA) debatably waa labada horyaal ee ugu haybadda leh ee beeraha ay ka soo jeedaan. Maxay ku kala duwan yihiin, iyo mid ka mid ah taas oo ka wanaagsan? The primary difference between the two are what each position...
10 Jan CPA vs CA (Chartered Xisaabiyaha): Waa kuwee waa ka wanaagsan in aad loogu talagalay?
Waa kuwee waa ka fiican? Waa kuwee naqshada caawin doonaa mustaqbalkiisa? Marka la go'aaminayo doorashadaada xirfadda in xisaabaad, aad waxaa laga yaabaa in dhibaato ah inta u dhaxaysa CPA ama CA dooran. Su'aasha muhiimka ah in baxaysaa waxay tahay haddii CPA faa'iido aad waddada xirfadda ama CA? There is no clear winner because both qualifications...
10 Jan CPA vs. CMA – Taas oo ka mid ah waa Better?
Posted at 22:00h in Accounting Careers, Main Blogroll 43 Comments
In this article, Nathan Liao from the CMAcoach.com, compares the CMA vs the CPA including the key differences and advantages between the two designations. Ma waxaad naftaada la weydiiyay barta qaar ka mid ah in CMA ama CPA waa shahaado kugu habboon? It absolutely crossed my mind many times before deciding to...